Antony iraisana amin'ny kolikoly ataon'ny PST
Home Products DataNumen Outlook Repair Antony iraisana amin'ny kolikoly ataon'ny PST
Antony iraisana mahatonga ny fisokafan'ny rakitra Microsoft Outlook PST na simba
Betsaka ny antony mamela anao Fisie Outlook PST simba na simba. Sokajinay ho sokajy roa izy ireo, izany hoe ny antony ara-pitaovana sy ny antony rindrambaiko.
Isaky ny tsy mahavita mitahiry na mamindra ny angon-drakitra ny fisie Outlook PST ny fitaovanao dia mety ho simba ireo rakitra PST. Misy karazany telo ny ankamaroany:
Tsy fahombiazan'ny fitaovana fitahirizana data. Ohatra, raha manana faritra ratsy ny kapila mafy ataonao ary ny rakitra Outlook PST anao dia voatahiry amin'ireo sehatra ireo. Avy eo angamba tsy afaka mamaky afa-tsy ampahany amin'ny fisie PST ianao. Na ny angona vakinao dia tsy marina ary feno lesoka.
Fitaovana tambajotra tsy mandeha amin'ny laoniny. Ohatra, ny fisie Outlook PST dia mitoetra ao amin'ny mpizara tambajotra, ary manandrana miditra ao amin'ny solosaina mpanjifa ianao, amin'ny alàlan'ny rohy tambajotra. Raha ny karatra interface interface, cables, ny router, ny hubs ary ny fitaovana hafa mandrafitra ny rohy tambajotra dia manana olana, avy eo ny fidirana lavitra ny rakitra PST dia mety hanimba azy io.
Herim-pahefana. Raha misy tsy fahombiazan'ny herinaratra rehefa miditra amin'ireo rakitra PST ianao, dia mety ho simba ny rakitra PST anao.
Betsaka ny teknika hisorohana na hampihenana ny kolikoly ataon'ny Outlook PST noho ny olana ara-pitaovana, ohatra, ny UPS dia afaka mampihena ny olan'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra, ary ny fampiasana fitaovana enti-miasa azo antoka dia mety hampihena ny mety hisian'ny kolikoly data.
Maro ihany koa ny kolikoly ataon'ny Outlook PST mitranga noho ny olana mifandraika amin'ny rindrambaiko.
Diso fanarenana ny rafitra fisie. Mety ho hitanao fa tsy mampino fa ny fanarenana ny rafitra fisie dia mety hiteraka kolikoly ao amin'ny PST. Fa raha ny marina, indraindray rehefa tapaka ny rafitry ny rakitrao ary manandrana manangona fitaovana fanarenana data na manam-pahaizana ianao hamerenana ireo rakitra PST eo aminy, dia mety mbola ho simba ihany ireo rakitra voaangona, satria:
Noho ny fahasimban'ny rafitra fisie, ny ampahany sasany amin'ilay rakitra PST voalohany dia lost maharitra, na soloan'ny angona fako, izay mahatonga ny rakitra PST voavonjy farany tsy feno na misy angona tsy marina.
Ny fitaovana fanarenana na ny manam-pahaizana dia tsy manana fahaizana ampy hahafahany manangona angon-drakitra fako ary hitahiry azy ireo ho rakitra miaraka amin'ny extension .PST. Satria ireo rakitra antsoina hoe .PST ireo dia tsy misy tahirin-kevitra mety amin'ny fisie Outlook, dia tsy misy ilana azy ireo mihitsy.
Ny fitaovana fanarenana na ny manampahaizana dia nanangona ireo blôgy data marina ho an'ny fisie PST, saingy tsy natambatra tamin'ny filaharana marina, izay mahatonga ny fisie PST farany voavonjy tsy azo ampiasaina.
Noho izany, rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana rakitra dia tokony hahita fitaovana / manam-pahaizana fanarenana data ianao hamerenana ireo rakitra PST anao. Fitaovana / manam-pahaizana ratsy hanaratsy ny toe-draharaha fa tsy ho tsara kokoa.
Virus na rindrambaiko maloto hafa. Virosy marobe no hikorontana sy hanimba ny fisie Outlook PST na hahatonga azy ireo tsy hiditra. Soso-kevitra tokoa ny hametraka rindrambaiko anti-virus kalitao amin'ny rafitra mailaka ao amin'ny Outlook.
Atsaharo ny fomba mahazatra an'i Outlook. Amin'ny toe-javatra mahazatra, tokony hiala amin'ny fomba amam-pahamendrehana ianao amin'ny Outlook amin'ny fitehirizana ireo fanovana rehetra ao amin'ny fisie PST ary avy eo tsindrio ny "Exit" na ny "Close". Na izany aza, raha voahidy tsy ara-dalàna i Outlook rehefa manokatra sy miditra amin'ny rakitra PST ianao, dia mora simba na simba ny rakitra PST. Mety hitranga izany raha mitranga ny tsy fahombiazan'ny herinaratra voalaza etsy ambony, na raha sahirana amin'ny fanaovana zavatra iray i Outlook ary atsahanao amin'ny alàlan'ny tsindrio "End Task" ao amin'ny Windows Task Manager, na raha vonoinao ny solosaina nefa tsy miala amin'ny fomba mahazatra ny Outlook sy ny Windows.
Ny tsy fahampiana amin'ny programa Outlook. Ny programa rehetra dia misy lesoka, toa izany koa ny Outlook. Ny lesoka sasany dia avy amin'ny fahitana fohy an'ny mpamorona. Matetika izy ireo dia azo antenaina fa tsy ho voavaha amin'ny alàlan'ny fanamboarana na patch fotsiny. Ohatra, tany am-piandohana dia tsy mino ireo mpamorona Microsoft fa hisy tahirin-kevitra marobe ao anaty rakitra PST, noho izany ny haben'ny PST an'ny Outlook 97 hatramin'ny 2002 dia 2GB amin'ny endriny. Saingy amin'izao fotoana izao, ny fifandraisana sy ny mombamomba anao dia mitombo haingana ka mitombo be ny rakitra PST. Rehefa manakaiky ny rakitra PST na mihoatra ny 2GB dia ho simba. Raha ny lesoka hafa kosa dia vokatry ny tsy fitandreman'ireo mpandahatra fandaharana. Amin'ny ankapobeny, tsy azo antenaina izy ireo fa raha vao hita, dia azo vahana amin'ny fanamboarana na patsa kely. Ohatra, rehefa sendra lesoka tsy nampoizina i Outlook dia hiteny hoe “Microsoft Outlook dia nisedra olana ary mila mihidy. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana.”Ary atsahatra tsy ara-dalàna, izay azo inoana fa hanimba ny fisie PST.
Fambara an'ny fisie PST manao kolikoly:
Ho fanovozan-kevitrao dia nanangona izahay lisitry ny lesoka sy olana iraisana rehefa mampiasa Outlook , izay misy ireo soritr'aretina rehefa simba ny fisie PST.
Amboary ireo rakitra PST manao kolikoly:
Azonao atao ny mampiasa ny vokatra azonay DataNumen Outlook Repair ny avereno ny rakitra Outlook PST anao maloto.